गैंडाकोटमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरि ७९ जना काँग्रेसमा प्रवेश – Mukundasen Television
गैंडाकोटमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरि ७९ जना काँग्रेसमा प्रवेश
| २४ आश्विन २०७८, आईतवार १६:३१ , प्रकाशीत
भूमिलाल पौडेल, गैंडाकोट, २४ असोज ।
गैंडाकोटको वडा नं १ का ७९ जना नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका छन । स्थानिय युवा शिव अधिकारीको नेतृत्वमा उनिहरु नेपाली काँग्रेमा प्रवेश गरेका हुन । शनिबार उनिहरु नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी पार्टी परित्याग गरि नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन । कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेस गरेकाहरुलाई नेपाली काँग्रेस तरुण दल विभागका केन्द्रीय सदस्य अमृत भट्टचनले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
नवप्रवेसीहरुलाई स्वागत गर्दै केन्द्रीय सदस्य भट्टचनले नेपाली कांग्रेसको चारतारे झण्डामुनी आए पछि भावी दिनहरुमा पार्टीले पार्टीप्रवेश गर्नेहरुलाई सधैं साथ दिने वताउनुभयो । उहाँले पार्टी एउटा परिवार भएको जिकिर गर्दै अहिले कांग्रेस विपीको सिद्धान्तवाट बाहिर गएको जस्तो देखिए पनि नवप्रवेसीहरुले बिपीको चिन्तन अनुसार अगाडी बढन निर्देशन दिनुभयो । उहाले पार्टीमा बफादार भएर लाग्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेस पार्टी प्रवेस गर्नेमा केही स्वतन्त्र ब्यक्तिहरु रहेको पनि उनिहरुले बताए । काँग्रेस पार्टी प्रवेश गर्दै शिव अधिकारीले कम्यूनिस्टहरुले मुलुकमा भ्रष्टाचार गरेकोले आफुहरुले नेपाली कांग्रेस रोजेको बताउँदै अब वडा नं. १ लाई कम्यूनिस्ट रहित वनाउन दिनरात एक गरेर लाग्ने बताउनु भयो । नेपाल तरुण दल जिल्ला कार्य समिति नवलपुरको आयोजनामा पार्टी प्रवेश तथा शुभकामना आदन प्रदान कार्यक्रम भएको थियो ।पार्टी प्रवेश तथा शुभकामना आदन प्रदान कार्यक्रममा वडा नं. १ का सभापति ठाकुरप्रमाद सापकोटाले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
तरुण दलका जिल्ला सचिव गोपाल सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नेहरुमा जनप्रतिनिधि प्रकाश सापकोटा, वडा नम्बर १ का पूर्व सभापति शिवकान्त काफ्ले, वडा नं. ५ का सभापति लक्ष्मण कार्की, तरुण दल गण्डकी प्रदेशका सहसचिव किसान गुरुङ, तरुण दल नगर सभापति हरेराम सापकोटा लगायत रहनुभएको थियो । कार्यक्रमको संचालका तरुण दलका नगर सदस्य कमल कँडेलले गर्नुभएको थियो ।
नेकपा एमाले गैँडाकोटको नयाँ नेतृत्वका लागि तीनजना विच प्रतिष्पर्धा हुने
शारदानगर खानेपानी आयोजना अन्तर्गत ओभरहेड ट्याङ्की शिलान्यास
सरकारले बाढी पहिरोबाट घर भत्केकाहरूको घर निर्माणका लागि ५ लाख दिने
गैँडाकोट, ३ कार्तिक । नेकपा एमाले गैँडाकोटको नयाँ नेतृत्वका लागि तीनजना विच प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको...
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा शारदानगर खानेपानी आयोजना अन्तर्गत ओभरहेड ट्याङ्की शिलान्यास गरिएको छ । महानगरपालिकाको...
आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान यस्तो
नवलपुरका ३१ हजार बालबालिकालाई कात्तिक ७ र ८ गते भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाईदै